Ukuqonda Ngokwakho | Isilimela 2022
Ungazichaza njani iiNqobo zakho zaBucala kwaye uphile ngazo uBomi obuzalisekisayo
Iimpawu zethu zobuqu yikhampasi yethu yokuziphatha ukuba masithini, masiziphathe njani, masiziphathe njani thina nabanye, kwaye nokhetho lobomi esilwenzayo. Ukufunda indlela yokubachaza kunokukunceda ube lolona hlobo lubalaseleyo lwakho.
Iindlela ezili-10 zokuba usoloko unguwe kwaye uphile ngolonwabo
Unokuba ngumntu owonwabe ngakumbi wakuba uzifumene ukuba ungubani kanye kanye kwaye ungubani. Nazi iindlela ezili-10 zokuqala ukuba nguwe kwaye uphile ngokunyanisekileyo.
Amaxabiso angama-30 aBalulekileyo aBalulekileyo okuPhila oBomi obufunayo
Ubomi bunokuba bomlingo, obungenakulindeleka kunye noxinzelelo. Rhoqo ngexesha elinye. Sebenzisa olu luhlu lwamaxabiso asisiseko ukunceda ekuthatheni isigqibo malunga nokuya kukukhokela kwiintsuku zakho.
Ukuzibonakalisa kwakho kukuNika njani uLonwabo kunye noBomi obuPhumeleleyo ngakumbi
Ngaba ufuna ukonwaba kwaye uphumelele ngakumbi? Lixesha lokuba uthathe inyathelo ubuye umva, uphume kwi-treadmill yobomi, kwaye uzenzele ukucinga ngobomi. Nantsi indlela.
Ungalimamela njani ilizwi lakho langaphakathi ukuze uzalisekiswe
Iindlela zokumamela ilizwi lakho langaphakathi, ukwenza izigqibo ezingcono kunye nezikhawulezayo, ukusombulula iingxaki ngokulula, kwaye uphile ubomi bokwaneliseka okukhulu.
Imibuzo ekhuthazayo eyi-100 ekwenza ukuba ucinge ngobomi bakho
Nalu uluhlu lwemibuzo ekwenza ukuba ucinge-ubuze iinkolelo zakho, kwaye ujongane namathandabuzo akho ukukunceda ufezekise ngakumbi ebomini bakho.
Izizathu ezi-5 zokuba kutheni kufuneka uhlale unguye
Xa kuziwa ekubeni nguwe, kunokubakho uxinzelelo oluninzi lokuzivumelanisa nehlabathi langaphandle. Nazi izizathu ezi-5 zokuba kutheni uhlala unguye.
Imibuzo engama-25 enokukunceda uziqonde wena kunye neNyaniso yakho eyiyo
'Ndingaziqonda njani ngcono?' Ukuba yile nto uyikhangelayo, thatha ixesha lokuziqonda ngcono ngale mibuzo ikhuthazayo engama-25.
Kutheni Ndithamba Kangako Kwaye Ndibi?
Ukuba novakalelo sisipho esimangalisa ngokwenene, kodwa siye sathotywa eluntwini njengobuthathaka. Ukuba ufumanisa ukuba uyazibuza, 'Kutheni ndinoluvo nje?' funda apha ukuze ufunde indlela enokuba namandla ngayo ebomini bakho.
Ungakufikelela njani ekuZiboneni ngokwakho (Isikhokelo samanyathelo nenyathelo)
Isikhokelo sabaqalayo sokuziqonda ngokwakho-yintoni kanye kanye, kutheni kubalulekile kuye nabani na ofuna ukuba ngcono kunye nendlela yokufumana oko.
Indlela yokuzazi kwaye ufune ukuziPhucula
Ngaba ufuna ukuziqonda ngcono ngokuphucuka okumangalisayo ebomini? Nantsi indlela yokuzazi kwaye ufune ukuphucula ngokwakho, ukuze uphile ubomi obanelisayo.
Ukuzazisa: Iindlela ezi-5 zokuBonakalisa nokuPhila ngokuNwabileyo
Ezi ndlela zilula zokuzibonela kunye nokucinga (okanye ukuzazisa ngokwakho) kunokutshintsha ingqondo yakho kwaye kuvule amandla akho kulonwabo lwenene.
Iingcebiso ezisebenzayo zokushicilela kwabaqalayo kwiKickstart
Ijenali ngumsebenzi ofanelekileyo onokukunceda ukuphucula impilo yakho yeemvakalelo kunye nengqondo. Nazi iingcebiso ezili-11 eziluncedo zokupapasha iindaba zabaqalayo.
Izibonelelo ze-18 zokuShicilela eziya kuguqula uBomi baKho
Ngaba ushicilelo lwakho? Nazi izibonelelo ezili-18 zokupapasha ukunceda umzimba wakho, ingqondo kunye nomsebenzi. Uya kufuna ukubeka usiba ephepheni emva kokufunda oku.
Iingcali zengqondo zithi Ngokwenene kunokwenzeka ukuba utshintshe ubuntu bethu
Ngaba ungabutshintsha ubuntu bakho? Ungabi libanjwa lobuntu bakho kwakhona! Fumanisa ukuba izazi ngengqondo zikwazile njani ukunceda abantu batshintshe ubuntu babo.
Iindlela ezili-10 zokuzihlola ukuze ufumanise isiNene sakho
Izenzo zokuzihlola ziya kukunceda ufumane ubuyena bakho ngokukunceda unikele ingqalelo kwinto ekwenza ukuba ungubani. Ukunyaniseka yimpendulo.
Ungakufumana njani ukuzazi kwaye uphile ngokuKhona
Ukwazi ngokwakho kubalulekile ekuphumeleleni nasekukhohliseni ukufikelela. Funda indlela yokusombulula iphazili yakho yokuziQala eyaziwayo kumanyathelo amane okugaya.
Imibuzo engama-50 yokuShicilela ngokuBonisa ngokuBonisa
Nazi imibuzo ezingama-50 zokushicilela ukuze uzibonise. Le mibuzo iya kukuvumela ukuba ume kancinci, ufikelele, uhlalutye, kwaye uthathe inyathelo eliyimfuneko ukuya phambili.
Indlela yokuziqonda ngakumbi kunye nokuLwela ukuba nguMntu ongcono
Ukuzazisa sisiseko sokukhula komntu. Ukulungele ukufumanisa indlela yokuziqonda ngakumbi kwaye uzabalazele ukuba ngumntu ongcono? Nantsi indlela.
Yintoni ukuZazisa (kunye nendlela yokunyusa eyakho)
Yintoni ukuziqonda ngokwakho? Ukuba ufuna ukuphumelela kuyo yonke indawo yobomi bakho, kuya kufuneka ufunde indlela yokonyusa ukuzazisa kunye nokusebenzisa amandla ayo.